musha nyika dzakabatana WWE Superstars Seth Rollins Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerican wrestler anozivikanwa zvakanyanya nezita remadunhurirwa “Muvaki".
Yedu Seth Rollins Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kweWWE superstar kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva nezve yake inouraya super-kick kupedzisa kune anopfugama anopikisa. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Seth Rollins 'Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Seth Rollins Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Kutanga, zita rake rakazara pakuzvarwa ndiColby Daniel Lopez. Seth Rollins ndiye anonzi ane mukurumbira akazvarwa pazuva re28th raMay 1986 kuBuffalo, Iowa, USA.
Akaberekerwa muUnited States asi zvakare ane yeArmenian, yeGerman uye yeIrish Heritage nekuda kwevabereki vake uye vabereki vakuru vasingazivikanwe zvishoma nezvake.
Mudiki Rollins aive Akarasika kubva kuna baba vake vekubereka pazera diki kwazvo. Nekudaro, iye akarerwa nedanho-baba vake Lopez.
Kukura kuIowa padivi pehanzvadzi yake mudiki Diandra Lopez uye hama yakatarisika isingazivikanwe nezvayo, Rollins aive mwana anonyara uye akapenga airarama hupenyu hwakajairika.
Nezve mauyiro aakaita nezve rake razvino basa, Rollins pakutanga akakura achida nhabvu uye akanamata Jerry Rice weSan Francisco 49ers.
Akazokweverwa kunorwa kusvika panguva yevechidiki uye akazvipira kumutambo nguva pfupi yapfuura. Achitaura pamusoro peizvi, Seti akamboti;…
'Ndaimbogara ndiri mutsigiri wechirwere uye ini ndainyatsoziva kuti izvi ndizvo zvandanga ndichiedza kuedza kubva kubva pandakanga ndiri anenge gumi nemashanu kana gumi nematanhatu ... uye nokuda kwechikonzero chipi nechipi, ndakanga ndisingadi kuita chimwe chinhu mushure mokunge chikoro '.
Seth Rollins Dzidzo:
Kuti ave mutsimba, Rollins akanzwa kuti aifanira kudzidziswa kusvika padanho. Akaenda kuDavenport West High Chikoro muIowa.
Ndichiri pachikoro, Rollins aive asiri mwana ane mhirizhonga aingotarisa kuwana mamakisi akanaka.
Wrestling prodigy zvaishamisa kuti aisabatanidzwa mumitambo yechikoro chesekondari asi akabatikana kutamba achitenderera neshamwari dzake uye kuita mutsimba pa trampoline kuseri kwake (mushure memaawa echikoro).
Rollins akapedza chikoro chesekondari mu2004 uye anogamuchira basa mukumisidzana gore rakatevera.
Seth Rollins Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Yekutanga kumira paRollins nyanzvi yekurwira basa yaive yekupinda kwake muTed Petty Kukoka Mutambo weScott County Wrestling (SCW).
Kunyangwe Rollins akabviswa mumaquarterfinal echiitiko ichi, akazoenda kuhwina mukwikwidzi weheavyweight weScW ndokupfapfaidza akapenda bhandi rake dema kuratidza "The Black Era"MuSCW.
Kwakazotevera kukwikwidza kwekutanga mumatunhu ebudiriro kwakaona Rollins achibatana uye achioneka muNWA Midwest, TNA Wrestling, Full Impact Pro, uye Pro Wrestling Guerilla.
Pamusoro weiyo pre-WWE wrestling basa, Rollins aive chikamu cheROH (Ring of Honor) ine zita rezita Tyler Black.
Kubudirira kwake munharaunda yekusimudzira kunosanganisira kuhwina ROH World Championship, ROH World Tag Team Championship uye 2009 Kupona kweMutambo weFittest.
Seth Rollins Biography Chokwadi - Simuka Mukurumbira Nhau:
2010 raive iro gore iro Rollins akabatana neiyo WWE roster ine zita rezita rekuti "Seth Rollins". Iyi yaive nguva yaakakunda mutambo wake wekutanga wakanangana naTrent Barreta.
Akazo kupihwa nzvimbo yekuvandudza yeWWE inozivikanwa seFlorida Championship Wrestling (FCW).
Yakanga iri paFCW iyo Rollins yakakura ikava mukurumbira mukurwira mushure memitambo yakawanda uye kukunda kunetsana naDean Ambrose.
Iye akazobatana pamwe chete Kutonga kweRoma naDean Ambrose kuti vagadzire inotyisa "The Shield" Tag timu, iyo yakanyora akati wandei ma tag anohwina, kutanga kubva 2012 kusvika vaparadzana uye gare gare vakaungana zvakare muna 2017.
Seth Rollins Hukama Hupenyu Hupenyu:
Pamberi pese kubudirira kweWWE superstar, pane musikana anofadza kana mudzimai. Seth Rollins akatanga kuburikidza nekuva nehukama hurefu nemusikana wake akadzokera Fiance, Leighla Schultz.
Ivo vaimbove shiri dzerudo vaive vaviri vasina kupatsanurwa vakachata muna 2014.
Vakaparadzana makore maviri gare gare muna 2 apo Schultz akawana kuti murume wake aive nehukama neNXT wrestler Zahra Schreiber.
Seth Rollins Anonyengedzwa paLeighla Schultz NXT wrestler Zahra Schreiber (inoratidzika kurudyi).
Schultz akatsamwa akaenderera mberi achiburitsa mapikicha asina hunhu aRollins uye mudiwa wake pamaakaundi enhau.
Zvimwe zvinenjodzi yaive yekuti mifananidzo yakaburitswa yakabuda muchidimbu paWWE sezvo Rollins Twitter feeds ichienzanisirwa pamwe newebsite yekambani.
Rollins akazoregerera ruregerero pamusoro pezvakaitika pa Twitter kunyora:
"Ndinoda kukumbira ruregerero kune vese vemuWWE uye mhuri yangu neshamwari dzemifananidzo yega yega yakaparadzirwa pasina kubvumirwa kwangu."
Ndinoda kukumbira ruregerero kune vese vemuWWE uye mhuri yangu neshamwari pamifananidzo yega yega yakaparadzirwa pasina kubvumirwa kwangu.
- Seth Rollins (@WWERollins) February 10, 2015
Iye akazoenderera mberi nehukama hwake naSchreiber. Nehurombo, ivo vaviri havana kugara kwenguva yakareba pamwe chete uye vakafunga kupatsanura mu2015.
Rollins parizvino ari kufambidzana nerunako rwunozivikanwa saSarah Alesandrelli.
Vakatanga sevakaroora muna Zvita 2016 uye vakaramba vari padyo kubvira naAlesandrelli achipinda akati wandei ezviitiko zveWWE zveRollins.
Seth Rollins Hupenyu hweMunhu:
Rollins murume anofara ane zvakajairika kune yakasarudzika nyaya yakamuita mumwe wevadi vanofarira mukurwa.
Akatumidza zita remangwana reWWE, Rollins anogara achizivikanwa nekusimbisa kuti vanhu vanotenda mune ramangwana uye maari nekuti ndiye ramangwana reWWE.
Maitiro aRollins anokura zvine mutsindo nezvezvitendero neramangwana zvinoita kuti vazhinji vasave nechokwadi nekutenda kwake. Mibvunzo yakadaro inosangana nemhinduro dzinoshamisa dzekusavapo sezvo Rollins ari asingatendi kuti kuna Mwari.
Iye achiri kuda kurarama hupenyu hwakanyarara, hunhu huri hangover yehunhu hwake hwekutanga. Chido chake chinosanganisira kutamba nhabvu, kiriketi, mitambo yemavhidhiyo uye kuteerera mimhanzi.
Seth Rollins Biography Chokwadi - Untold Basa Rechokwadi:
Pane zvirevo zvekuInternet izvo Seth Rollins akambotora WWE Title kubva kufa-zvakaoma Brock Lesnar.
Seth Rollins ndiye oga wrestler kuti atongobata United States Championship uye WWE World Heavyweight Championship panguva imwe chete.
Rollins akaputsa John Cena's mhino nemabvi. "Ndakanzwa mhino yake ichiputika, uye ndakainzwa pamabvi angu,". Yakatsanangurwa Rollins mubvunzurudzo. Cena, zvisinei, akaenderera mberi kukunda mutsara.
Seth Rollins achipedza kufamba “Curb Stomp”Yakamborambidzwa neWWE nekuti yaifungidzirwa kuva ine chisimba zvakanyanya.
Rollins ndiye mubatanidzwa-weyanzvi yewrestling chikoro inozivikanwa seNhema & iyo Brave Wrestling Academy muMoline, Illinois.
Pane zvimwe zvinonakidza zvinoitwa, Rollins akaita firimu rake kutanga muna 2016. Iyo bhaisikopo rakanzi; "Sharknado: The 4th Awakens".
Mafirimu ake achangoburwa senge panguva yekunyora ari "Kugadziriswa Nesimba 2017"Uye"MaJetsons & WWE: Robo-WrestleMania!".
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Seth Rollins Childhood Nhau uye Untold biography chokwadi.